राप्ती नदीमा तटबन्धको काम सुस्त, चारबर्षसम्म पनि अधुरै - Tulsipur Online
राप्ती नदीमा तटबन्धको काम सुस्त, चारबर्षसम्म पनि अधुरै
Posted by Admin | २१ असार २०७७, आईतवार २०:५० |
२१-असार / राप्ती नदीमा निर्माण हुदै गरेको तटबन्धको काम चार बर्ष पुग्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन् । बितेको आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा १२ वटा स्थानमा तटबन्ध निर्माण गर्न झण्डै ८७ करोडको सम्झौता भएको थियो । ति आयोजनाहरु दुई बर्षमा सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । तर, सम्झौता भएको चार बर्ष पुगिसक्दा समेत सम्पन्न हुन् सकेको छैन् ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. ६ लमही दाङले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण बजेट अभाव देखाएको छ । ‘बजेट हुदा ठेकेदारले काम गरेनन् जब बजेट कम हुदै गयो । काम पनि भयो । अहिले भुक्तानी गर्ने बजेट छैन’ईञ्जिनियर रामचरित्र चौधरीले भने–‘अहिले पनि बजेट कम छ । भुक्तानी दिन धेरै बाँकी छ ।’ जब राप्ती नदिमा बाढी आउने समय हुन्छ तब मात्र निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरुलाई कामको चटारोले छुने गर्छ ।
आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा शुरु भएका आयोजना २०७४/०७५ मै सकिनु पर्ने हो । तर, आयोजना कहिले सकिन्छ त्यो टुंगो छैन । राप्ती नदि कटान प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरि साढे ११ किलो मिटर तटबन्ध निर्माण हुनु पर्नेमा हालसम्म आठ किलो मिटरमा मात्र तटबन्ध गरिएको छ। ।‘ लकडाउनले गर्दा पनि कहिले के कुराको अभाव हुन्छ कहिले के कुराको अभाव’चौधरीले भने–‘सुरु देखिनै सुस्ताएको काम, लकडाउनले झनै समस्या पा-यो ।’
हालसम्म गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ बडहरामा चौध सय पचहत्तर मिटर तटबन्ध हुनु पर्नेमा सात सय मिटर भएको छ । वडा नं. २ को तकियापुरमा १९ सय मिटर हुनु पर्नेमा हालसम्म सोह्र सय मिटर तटबन्धको काम भएको छ ।
त्यस्तै लमही नगरपालिका वडा नं. ४ र ६ अन्तर्गत पर्ने बलरामपुरमा दुई किलो मिटर हुनु पर्नेमा एक किलोमिटर मात्र तटबन्धको काम भएको छ । त्यस्तै गढवाको कान्छी गाउँमा डेढ किलो मिटर हुनु पर्नेमा जम्मा आठ सय मिटरमा तटबन्धको कार्य भएको छ, भने राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ को कालिपुरुवामा १५ सय ६० मिटर हुनु पर्नेमा हालसम्म एककिलो मिटरमा मात्र तटबन्धको काम सम्पन्न भएको र अरु काम जारि रहेको इञ्जिनिएर चौधरीले जानकारी दिए ।
राप्ती नदि कटान र डुबान क्षेत्रमा यस अघि तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भैसकेको बडहरा र जेठान गाउँमा बयानब्बे हेक्टर किसानको खेतबारी निस्किएको छ । बलरामपुरको हकमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछी करिब दुई सय पचपन्न बिगाह जमिन निस्किने कार्यालयले जनाएको छ ।
लमहीमा रहेको यस कार्यालयले दाङ्गको राप्ती,बबई र बाँकेको राप्ती नदि कटान रोकथामका लागि काम गर्ने गर्दछ । यो चालु आर्थिक बर्षमा दाङ्गको राप्ती, बबई र बाँकेको राप्ती कटान डुबान रोक्नका लानी लगाईने तटबन्ध कार्य गर्न भनेर पन्ध्र करोड बजेट आएको थियो । निर्माण कम्पनिहरुले कुल बजेट मध्ये बाट हाल सम्म चौतिस करोड सच्चालिस लाख बैसट्ठी हजार दुई सय चौरासी रुपैया पेश्की बुझी सकेका छन् ।
Previousमोटरसाईकलको ठक्करबाट ४ बर्षीया बालिका घाइते
Nextदाङमा बन्दाबन्दीमा २९ जना जेल चलान